‘मर्जरको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरुको हातमा बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिनु पनि पब्लिकको हितमा हुन्न’ |
‘मर्जरको नाममा केही सीमित व्यक्तिहरुको हातमा बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिनु पनि पब्लिकको हितमा हुन्न’
कर्पोरेट नेपाल , १८ श्रावण २०७६, शनिबार १९ श्रावण २०७६, आईतवार
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन ढिलो गरी चालु आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । बैंकहरुको संख्या बढि भएको चर्चा चलिरहेको बेला मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जरमा जान बाध्यकारी हुनेगरी नीति आउने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि त्यस्तो भएन् । मर्जरमा जान चाहनेलाई पनि थप सुविधाहरुको व्यवस्था भने गरिएको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले कसरी सर्कुलर पठाउने हो ? भन्ने कुरामा बैंकरहरु ‘वेट एण्ड सी’मा छन् । यसै सन्दर्भमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका सिइओ गोविन्द ढकालको छोटो प्रतिक्रियाः
मौद्रिक नीतिपछिको डभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनको धारणा के हो ? कसरी लिनुभएको छ नीतिलाई ?
मध्यस्थ किसिमको मोनिटरी पोलिसी (मौद्रिक नीति) हो यो ।
जस्तो खालको आउँछ भन्ने डर थियो, त्यो भएन ?
होइन् । आउने यस्तै हो । हाम्रो बुझाई गलत हो । मोनिटरी पोलिसी भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउन आउने हो । पहिला जुन खालको कुरा भएको थियो, बाध्यकारी खालको पोलिसी आउँछ कि ? भन्ने, त्यो नआएको सत्य हो । तर मोनिटरी पोलिसी जस्तो आउनुपर्ने हो त्यस्तै आएको छ । तर जे भयो राम्रो भयो जस्तो लाग्छ । फोर्स मर्जर गर्यो भने त्यो मर्जर सफल पनि नहुन सक्छ । त्यसमा अरु समस्याहरु आउँछ ।
मर्जरमा जान चाहनेलाई जुन छुटहरु दिइएको छ, यसको संकेत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नै भन्ने हो । विशेषगरी बाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढि भयो भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यसको संख्या घटाउने नाममा केही सीमित व्यक्तिहरुको नाममा बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिएर अहिले पब्लिकले पाइरहेको जुन सेवा सुविधा छ, त्यो पनि खोसिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन् । त्यो आवश्यकता र सबैको दायित्व पनि हो । तर पनि मर्जर हुनुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ । विकास बैंकको हकमा त ९० बाट घटेर २५–२६ मा आइसकेको छ । यो घटेर १५ देखि १८ को बीचमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले पनि अप्रत्यक्षरुपमा मर्ज गर्नका लागि शाखा खोल्नदेखि स्प्रेड रेटमा केही सुविधाहरु दिइएको छ । यसले पनि केही बैंकहरु आकर्षित हुने संभावना छ । अर्को कुरा मोनिटरी पोलिसी पछाडि सर्कुलर कसरी आउँछ ? त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ । केहिलेकाहीं मोनिटरी पोलिसीमा आएका कुरा पनि सर्कुलरमा नआएको स्थिति छ । सर्कुलर आउँदा क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका बैंकहरुलाई लक्षित गरेर आउन पनि सक्छ । त्यसकारणले सर्कुलरमा प्रेसर गर्ने किसिमले नआउला भन्न पनि सकिदैन् । र, जुन मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो मध्यस्थ नै भएर आएजस्तो लाग्छ ।
सुविधा दिएर बैंकहरु मर्जरमा आउँछन् भन्ने तपाईंलाई विश्वास छ र ?
यस्तो हो, पहिला गर्भमेन्टले डिभिडेन्टमा दिएको ट्याक्स छुट (मुनाफामा कर छुट)को कुरा छँदैछ । त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्को कुरा शाखा खोल्ने कुरामा स्वीकृतिविना काठमाडौंमा शाखा खोल्न पायो भने धेरै बैंकले खोल्छन् । यो महत्वपूर्ण खुडकिलो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्तै, स्प्रेड रेट र प्रायोरेटी सेक्टरको कर्जाको बढाउने कुरा एक बर्षको समय थपिएको छ । अर्बौंमा शुन्य दशमलव १ प्रतिशत भनेको पनि करोडौंको कुरा हुन्छ । यो बाहेक आफ्नो कारणले पनि मर्ज हुनुपर्ने बाध्यता छ बैंकहरुलाई । उनीहरु विस्तारै मर्ज हुन्छन् । त्यो बाध्यता के भने क्यापिटलको कुरामा रिर्टन राम्रो पनि दिन नसक्ने, विजनेशको कुराले एक्सपान्शन पनि गर्न नसक्ने । अहिले इन्टेरेष्ट रेट सबैमा एउटै हिसावको छ । यसले पनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कुरा त्यही नै आउँछ कि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर कसरी जारी गर्छ । सायै यही हप्ता आउँछ होला ।
जस्तो गर्भनरले जति बेला पनि फिनटेक, फिनटेक भन्दै हुनुहुन्छ । सञ्चालन खर्च बढ्यो, घटाउन पनि मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने गन्दै आएको देखिन्छ । सञ्चालन खर्च बढेकै हो र ?
अपरेशनल कष्ट त घट्छ अलिकति । किनभने बोर्ड (सञ्चालक समिति) एउटा भयो । सिइओ एउटा भयो । आइटीका कुरामा पनि सिंगल आईटीले काम गर्ने भयो । तर मर्जर भएकै बर्ष सबै कष्ट घट्छ भन्ने हुँदैन । क्रमसः घट्दै जाने कुरा हो । यसको इफेक्ट भनेको पाँच बर्ष लाग्छ । जुन ब्रान्चहरु खोलिसकेको छ, तिनलाई रिलोकेटेड गर्नुपर्यो । कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । मर्जर पोजेटिभ भयो । कुनै विवाद भएन् । कर्मचारीहरुमा कन्फिक्ट आएन् भने विस्तारैः त्यसको पोजेटिभ रिजल्ट आउँछ । तर मिलाउन सकेनौ भने गाह्रो हुन्छ । स्टेकहोल्डरहरु त एक पटक मिलेपछि सकियो । तर पोष्ट मर्जर सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो । वास्तकमा स्वाप रेसियो कति हुने, सञ्चालक र सिइओ को को हुने ? भन्ने कुरा मर्जर होइन् ।
बाणिज्य बैंकहरुलाई त चल्न गाह्रो भएर संख्या घटाउने कुरा भइरहेको छ । विकास बैंकहरुलाई त झन गाह्रो होला ?
गाह्रो होइन् । डेभलपमेन्ट बैंकहरुको मार्केट त यति ठूलो छ कि कुनै गाह्रो छैन् । हुन त डभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या घट्दै गएको छ । संख्या घटे पनि शाखाहरु भने बढेको छ । विकास बैंकहरुको उपस्थिति घटेको छैन् कहीं पनि पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास बैंकमा सेवा लिन आउनेहरु जति खुशी भएर आउँछन्, कमर्सियल बैंकमा त्यसरी आउँदैनन् । त्यो क्षेत्रमा सानो सानो कर्जा लिनेको संख्या बढि छ । कमर्सियल बैंकको ध्यान त्यस्ता कर्जामा गएको देखिन्न । अधिकांश डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले गर्ने हो । करोड करोड लगाएर काम गर्ने मानिसको संख्या निकै थोरै छ । मध्यम बर्गीय परिवारले पाँच लाख, १० लाखबाट काम गर्न सुरु गर्छ । त्यो मार्केट भनेको विकास बैंकको मार्केट हो । त्यसकारण स्थानीय निकायहरुमा विकास बैंकलाई झन राम्रो भएको छ । जनता विकास बैंक नै खोज्दै आउने अवस्था छ ।
लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने कुरा पनि छ नि ? पुँजी बढेपछि पहिला जस्तो रिर्टन अहिले छैन् ।
रिर्टन त स्प्रेड दर आदि कुराले गर्दा एक दुई बर्ष हो । कमर्सियल बैंकको भन्दा डेभलपमेन्ट बैंकको रिर्टन राम्रो छ र हुन्छ । पूराना कमर्सियल बैंकहरु नलिब, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रिर्जभ क्यापिटलभन्दा बढि छ । त्यो भएर उनीहरुको रिर्टन राम्रो भएको हो । विकास बैंकको हकमा एक दुई दुई बर्ष १२–१५ प्रतिशतको रेसियोमा मुनाफा दिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसपछि २० प्रतिशत प्लस दिन्छन् ।
गरिमाको योजना के गर्छ मर्जरको कुरामा ? कसैलाई गाभ्ने, कसैसँग गाभिने, मर्ज हुने ।
हामी तीन वटा मर्ज भइसकेको हो । अहिले हामी अल्ली विजनेश एक्सपान्शन गरौं भनेर लागेका छौं । मर्ज गर्ने कुरा प्रोमोटरहरुको कुरा हो । भोलि राम्रो अफर आयो भने, जस्तो भोलि नविल बैंकले आउनुहोस् भन्यो भने हाम्रो सञ्चालक समितिको मन परिवर्तन पनि हुनसक्छ । जानै हुन्न भन्ने पनि भएन् । मर्जमा गइहाल्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन् । क्षेत्रीयस्तरको राम्रो विकास बैंकहरु गाभ्ने भन्ने सोचमा अझै पनि हामी छौं । तर मर्जरका लागि भनेर लागिपरेर हामी हिँडेको अवस्था छैन् ।
नयाँ आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीति प्रस्तुत हुँदै
अनिल शाह भन्छन्ः फोर्स मर्जरको बन्धनबाट मुक्त भयौं, सबै कुरा जोगियो
मौद्रिक नीतिबारे बैंकरको प्रतिक्रियाः हामी सुरक्षित रह्यौं, उत्साहित भयौं
नेपा ढुकुबाट ४ बजे आउँदैछ मौद्रिक नीति
नेपाली–भारत सीमा विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वपक्षीय बैठक, विज्ञ पनि आमन्त्रित
उद्योग बाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा स्थगित, शेखर गोल्छालाई ढुक्क
व्यवसायी रुप ज्योतिलाई तीन दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
रुप ज्योतिको गिरफ्तारी प्रति चेम्बरको आपक्ति
भारतको गलत नक्साबारे गैरआवासीय नेपाली संघले पनि बोल्यो, विश्वभरका नेपालीलाई एक हुन आव्हान